Bonke abathandi ukuphumula ophucukile, yebo, sibophekile ukuba ibandakanye izindawo ezifanele ukuvakashela. Akungabazeki ukuthi othile ngaphandle kwemingcele ye imigwaqo ezindaweni ku movie siphela edolobheni elingumakhelwane, kodwa othile futhi umhlaba wonke akwanele. Futhi lokhu kuyiqiniso elingenakuphikwa nakanjani luhlukanisa abantu ku abathandi art kanye nabantu boke. Ngoba uma sokuzindla mayelana injabulo yobuhle, kodwa kufinyeleleke kunoma ubani ngokushesha ezifika engqondweni zonke izinhlobo zamasiko. Lokhu yezobuciko neminyuziyamu, futhi ekhonsathini amahholo, kanye nezinye izikhungo yalolu hlobo. ukuvakashelwa njalo kuya izikhungo ezifana akugcini nje ngokushintsha indlela yokuphila uyenze ezihlukahlukene, kodwa futhi sishintsha ingqondo nomphefumulo ibe isiqondiso kangcono.
Phela, wonke umuntu kuphela othenga amathikithi Museum, yebo, isiqalile kakade, "ukubekela up" zezobunhloli injabulo yobuhle. Ngesikhathi esifanayo, ngokucace kakhudlwana kuyasiza uthinte umsebenzi uqobo nomuntu ngqo, okuyinto kubonakala ngokukhethekile ekuhlobaneni ebhayisikobho. Ngaphezu kwalokho, cishe zonke yeshashalazi eMoscow njalo Nokho kusimangaze izivakashi ezintsha hhayi kuphela, futhi Ezivamile ayo - aficionados zale nkundla. Phela, abathandi lolu hlobo lobuciko is ikakhulukazi uzama ukuthenga amathikithi kule nkundla izitayela isizini. Ngaphezu kwalokho, ngendlela ehlelekile ukubona abaculi abadumile futhi ujabulele isiteji omangalisayo okwesikhathi stratum ikakhulukazi kulo mphakathi kuyindlela yokuphila. Ngoba, ngokuvamile nizuza Kontramarka eMoscow yeshashalazi, abalandeli eziningi kweziqondiso zokudala futhi beba amahle ebukekayo wokugada amandla lokusungula. Lokhu kuthambekela kwemvelo ukuze ubuhle ikakhulukazi uphefumulela ithemba ukuze kulondolozwe esintwini sisonke. Phela, akunangqondo yazohlala ukucindezeleka, ezinhlelweni zethelevishini nakuyi izindaba Inthanethi. Isidingo sokuthi kube kunoma iyiphi abantu abanjalo, izikhathi noma imicimbi, ukubamba iqhaza kulokho ukunikeza ithemba bese ulinda engcono. Futhi, mhlawumbe, uma sicabangela iqiniso lokuthi ethiyetha kungenziwa ngokuthi uhlobo yisiboniso ubuhle kanye ukunambitheka. Akukhona nje ngaphandle kwesizathu njengoba inombolo enkulu izakhamuzi kuyothathwa ngokuthi ngumnikazi ezokungcebeleka unomphela yaseshashalazini nje enkundleni e Moscow, phakathi okuyinto imuphi Akungabazeki ukuthi le kakhulu.
Kuyacaca ukuthi, ngokuvamile ukuthenga yaseshashalazini pass eqondene, bonke izivakashi okubonisa ngale ndlela ukuzibophezela kwabo isikhungo nezibukeli yayo uthando. Lokho, akungabazeki, kubalulekile kakhulu yemidlalo. Futhi inothi, eqinisweni bonke umqondisi bokubeka yemidlalo, ezidumile ikakhulukazi, abayeki ukucabanga mayelana nightmare zabo - ukudlala ngaphandle izibukeli. Phela, zonke yaseshashalazini ngokwakhe efuna ukwaziwa kanye waseshashalazini kunesidingo. Futhi amathiyetha ethandwa kakhulu futhi owaziwa isivakashi "ivoti" nje ukuvakashelwa yabo evamile. Ngokwesibonelo, ukuthengwa abanye pass-productions bonke abalandeli yobuciko waseshashalazini bavame hhayi kuphela isizini prime, kodwa off-isizini. Futhi isizathu salokhu - a udumo kumfanele nokunakwa emphakathini. Kulokhu, Award Izithameli ku angenamkhawulo ngempela. Ngu amathikithi okuthenga Theatre Satyricon, bonke Ongoti bangempela hhayi nje "amukela" wenza ukusebenza futhi emkhathini, kodwa futhi banikeza emuva nezinhlayiya ngenxa yomphefumulo wakhe, uthando bakhe beqiniso yobuciko.
Amafasitela Ukuhweba chipboard
Kungani amakati lokunyathela imilenze yethu? Emuva eseyingane
Thola ukuthi yini ukudla aqukethe vitamin B12. Izimpawu ukuntuleka vitamin B12 kanye amavithamini
Imodeli Russian Ksenia Kahnovich: Biography, ukuma imingcele futhi ukuphila siqu